बिरामी भइयो? सुवनमा रहेको यो अस्पताल जानुस्, नेपाली सहयोगी हुनुन्छ। – Eps Sathi
February 6, 2021 1038
बिरामी हुन त कसलाई मन पर्छ र? हाम्रो शरीरकै बनौट नै त्यस्तो छ आफ्नै शरीर आफ्नै बशमा हुदैन। कहिलै के हुन्छ थाहा हुदैन। त्यसैले आफ्नो शरीरको ख़्याल आफैंले राख्नु पर्दछ। अझ बिदेशी भूमीमा बिरामी हुँदा घरको याद खुबै आउँदछ।
बिशेष गरि कोरियामा बिरामी पर्दा मुख्य गरि भाषाको समस्या आउँदछ। धेरैजसो अस्पतालहरुमा अंग्रेजी भाषा खासै नबुझ्ने तथा हामी आफैंलाई पनि अंग्रेजीमा आफ्ना समस्या बताउने गाह्रो हुने गर्दछ। अस्पतालहरुमा कोरियन भाषामा आफ्नो समस्या बिस्तृत रुपमा भन्नलाई आफूमा कोरियन भाषाको राम्रो ज्ञान चाहिन्छ।
यस्तो समस्या भोगिरहेका नेपालीहरुका लागि आफू बिरामी भएमा र कोरियन भाषाको समस्या भएमा हामीहरुकै सहयोगका सुवनमा रहेको एक अस्पतालमा नेपाली सहयोगि हुनुन्छ। कोरियाको सुवनमा रहेको सुवन जुङआङ(수원중앙병원) अस्पतालमा सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुलाइ मध्य नजर गर्दै अस्पतालले कोरियन भाषा नबुझने नेपाली हरूका लागि नि: शुल्क नेपाली भासा अनुवाद गरिदिने सुबिधा दिने गरेको छ।
यस अस्पतालमा कानूनी र अवैध (Legal and illegal) सबैका लागि चेकअपहरू उपलब्ध छन्। यो अस्पताल सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म विहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अनि शनिवार विहान ९ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म खुल्ने गरेको छ।
यो अस्पतालले विदेशीहरुलाई उपचार सेवामा विशेष छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ। यस हस्पिटलमा बिदेशीहरुले १० देखि २० प्रतिशत छुट समेत पाउनेछन्। आइतबार भने हस्पिटल बन्द रहने गरेको छ। अझ नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरुका लाई हेल्थ चेकअपमा विशेष छुट समेत रहेको छ। यो हस्पिटलमा जानु परेमा ०१०-५८१०-३२८८ नम्बरमा सम्पर्क गरी बिस्तृत रुपमा बुझेर जान सकिन्छ।
Prevटिकटक बनाउने क्रममा ज्या,न गयो करुणाको
Nextबर्डफ्लु फैलिएपछि कोरियामा मासु तथा अण्डको मुल्य बढ्यो